Maxaa Cusub – Page 12 – Shabakadda Amiirnuur
Madaxweynaha Waqtigiisu dhamaaday ee kursiga ku Mintidaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay awaamiir ka soo baxday Shisheeyaha la baxay Beesha Caaalamka oo la xariirtay in si deg deg ah loo qabto shir Doorashooyin ku saabsan. Qoraal ka soo Baxay Madaxtooyada Muqdisho ayaa lagu sheegay in 15 Bishaan Febraury Magaalada Garoowe […]
weeraro lagu qaaday Shisheeyaha Shabeelaha dhexe ku sugan.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Shababul muajaahidiin ayaa Xalay iyo Shalay weeraro ku qaaday Fariisimo Ciidan oo ku yaalla Gobalka Shabeelaha dhexe oo ka mid ah Meelaha Shisheeyuhu duulaanka ku joogo. Midka mid ah weeraradaas ayaa Xalay ka dhacay Fariisin Ciidamada Burundi ku leeyihiin Deegaanka Xaajji Cali waxaana lala beegsaday Ciidamada […]
QAABKEE LOO DILAY TALIYIHII SIRDOONKA DHUUSO MARREEB
Qarax Shalay ka dhacay Duleedka Degadma Dhuuso marreeb ee Gobalka Galgaduud ayaa lagu dilay Taliyihii Sirdoonka ee degmdaas iyo ciidamo badan oo ilaalo u ahaa. Cabdirashiid Cabdi-nuur Sheekh doon (Qooje) ayaa la sheegayaa in ay la dhinteen 14 ilaalo u ahaa waxayna taasu tirada dhimashada ka dhigeysaa 15 ruux. qarax […]
WEERARO LAGU QAADAY CIIDAMADA UGANDA
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay weeraro ku qaaday Dhufeysyo Ciidamada Shisheeye ku leeyihiin Gobalka Shabeelaha hoose. Weerarada ayaaa ka Dhacay Deegaano kaabiga ku haya Magaalada Baraawe waxaana laga maqlayay diryaanka hubka la isweydaarsanayay. Goobaha la weeraray waxay kala yihiin, Buur colow, Biyo maalow iyo inta u dhaxeysa Deegaanka Ambareeso […]
War Gelin iyo Cudur daar
waxaanu akhristayaasha uga cudur daaraneynaa mudooyinkaan oo wararka xoogaa kala go’ ah inaga galay. Insha Allaaah hadda kadib wararki aad nooga barateen waxay ahaa donaan kuwo joogta ah marka sidaas ula socda.
Alshabaab oo Filim tixane ka soo saareysa balanqaadyadii beenta ahaa ee Farmaajo
Garabka Warbaahineed ee Alshabaab ee Alkataaib ayaa Balanqaaday in uu Baahi doono filim lix Xalqo ka kooban oo ay kaga hadleyso Balanqaadyadii beenoobay ee Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa kale oo filimka looga hadlayaa Gumeysiga wadanku jiro haddii ay tahay Dhanka dhaqaalaha, dhanka Ciidanka ,iyo Dhanka Siyaasadda […]
Ku dhawaad sodon askeri oo laga dilay Shisheeyaha iyo Dowladda Federaalka ah
Ciidamada Xarakada SHabaabul Mujahidiin ayaa xalay weeraro ku qaaday Fariisin Ciidamada Jabuuti, ku leeyihiin Magaalada Jalalaqsi ee Gobalka Hiiraan iyo Dhufeysyo Ciidamada Burundi ku leeyihiin Jowhar iyo Deegaanka Xaajji Cali ee Gobalka Shabeelaha dhexe. dirayaan Hub la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay goobaha dagaalaadu ka dhaceen iyo kuwa ka agaha dhaw. […]
Alshabaab oo soo Saartay Filim Meydka Askar Maraykan ah lagu arkayo
Xarakada Shababaul Mujaahdiin ayaa soo saartay Muuqaal ku saabsan Weerarkii sanadkii hore ay ka fulisay Saldhiga Maraykanku ku leeyahay Kenya ee Manda Bay kaasoo lagu arkayo Diyaaradah Dowladda Maraykanka oo la gubanaya iyo Meydadka Askar Maraykan ah. sidoo kale waxaa ka muuqanaya Filimka oo uu duubay Garabka Warbaahibeed ee Alshabaab […]
Kenya oo askar looga laayay jubada hoose.
Ugu yaraan 8 Askeri oo Kenyaati ah ayaa Shalay ku naf waayay inta u dhaxeysa Deegaanka Taabto iyo Degmada Dhoobleey ee Gobalka Jubada hoose. waxaa la xagiijinayaa in askarta la dilay laba ka mid ah ay mid ahaayeen saraakiil waxaana geeridoodu timid markii Gaari ay saarnaayeen Qarax ka kacay. Gaariga […]
Itoobiyaan Ugandheys ,Burundi Kenyaati iyo Soomaalida la shaqeyso oo weeraro Khasaare geystay la kulmay.
14 Askeri oo Soomaalida Shisheeya la shaqeyso ka mid ah iyoa askeri burundi ah ayaa ku nafwaayay Qaraxyo iyo weeraro Shalay Ciidaamada Xarakada Shbaabaul Mujaahdiin Shalay ka fuliyeen GobalKa Shabeelaha dhexe gaar ahaan inta u dhaxeysa Balcad iyo Gololleey. waxaa xusid mudan in ay jiraan Ciidamo dhaawacmay iyo Gaari Cabdi […]